umbuzo iadaptha joestick
iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo #56 by ferdiwi
hi akukho iadaptha ukutshintsha joestick ukusuka 15 kancinane iadaptha USB .Mna winder icala Microsoft kwaye ofezekileyo ngoko i kufuneka ngokwenene ukwazi ukuba kukho nasiphi na isisombululo ngokuba i wazama omnye USB joestick kodwa hayi kubulela efanayo kubo bonke
iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo #57 by rikoooo
Ndicinga ukuba oku kufuneka asebenze kuwe https://www.amazon.com/GamePort-Converter-Adapter-Joysticks-Controller-Steering/dp/B00FDOBVZG
iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo #58 by rikoooo
impazamo yam, kubonakala akukho iadaptha ehambelana nalo eno-Microsoft SideWinder, ukuba imele ibe desktop ethile
iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo - iminyaka 2 iinyanga 3 ezidlulileyo #76 by Gh0stRider203
(KWAFUNEKA ukuhlela njengoko va nga sithanda amakhonkco eBay ...)
Ukususela oko Ndiye ukufunda kule umsonto, kangangoko oku buhlungu mna .... ungagcina kokuba ukuthenga induku entsha lonke
Mina, Ndikucebisa i icons X45. Nangona nje omdala umfuziselo Stick & umcephe wokunyusa, ndiye kuye ukuyisebenzisa iminyaka emininzi yaye ndiyithanda kakhulu oko. Kuyavunywa ukuba, inkoliso endiza yam yenziwa jumbos, Ndiye ndafumanisa ukuba olukhulu malunga naluphi na uhlobo nje moya. Umelwe elininzi amaqhosha uyakwazi programmer kunye itshintshela umnqwazi eziliqela (ngokuvumela kuba ngaphantsi keyboard ukusetyenziswa). - 1st link
I engambi Ndafumanisa kwi Amazon $ 89.99 + $ 7.49 yokuthumela. EBay waba ubunzulu ngaphantsi kwi $ 24.99, + $ 10.shipping kodwa abazukudwelisa kangangethuba elide. Lo omnye nangona nje intonga & umcephe wokunyusa. Akukho ncwadi, akukho diski. - eBay into 322399578359
Andizange ndifumane omnye ukuba kancinci kakhulu kwi $ 55 eBay Lowo yonke into. Umcephe, intonga, manual (leyo endingazange efika BTW lol), kunye CD yona. (3rd link) oh kunye ezamahala yokuthumela. - eBay Item 222389050446
Ndiyathemba oku kuluncedo, kwaye ndicela uxolo ukuyo le nto!
Uhlobo lokugqibela: I-2 iminyaka ye-3 inyanga edlulileyo Gh0stRider203.
Ixesha ukwenza page: 0.187 imizuzwana